हेर्नुहोस् तासबाट बनाइएको विश्वको सबै भन्दा ठुलो भवन
१२ कार्तिक २०७२
विश्वको सबै भन्दा ठुलो तासबाट बनाइएको भवन सन् २०१० मार्च १० मा मकाउमा अनावरण गरिएको थियो । वेनेसियन मकाउ, मकाउ प्लाजा तथा स्याण्ड मकाउको स्वरूपमा बनाइएको उक्त तासको भवन करीब १०.३९ मीटर लामो, २.८८ मीटर अग्लो तथा ३.५४ मीटर चौडाई रहेको थियो । अमेरिकी नागरिक ब्रायन बर्ज द्वारा उक्त भवन निर्माण गरेका थिए जून हाल सम्मकै विश्व रेकर्ड कायम रहेको छ । ४४ दिन लगाएर…विस्तृत समाचार »
११ कार्तिक २०७२
११, कात्तिक मुम्बई । निर्देशक एसएस राजामौलीले भारतको सर्वाधिक सफल चलचित्र ‘बाहुबली’ को तेस्रो संस्करणसमेत निर्माण गर्ने भएका छन् । बाहुबलीको दोस्रो भागको निर्माणमा जुटेका उनले सोही शृंखलाको तेस्रो चलचित्र पनि निर्माण गर्ने बताएका हुन् । तर तेस्रो चलचित्रको सम्बन्ध अघिल्ला दुई चलचित्रसँग नहुने उनको प्रष्ट पारेका छन् । ‘बाहुबली–२’ को छायांकन ४० प्रतिशत पुरा भइसकेको छ । बाँकी छायांकन नोभेम्बरको मध्य वा डिसेम्बरको सुरुबाट…विस्तृत समाचार »
९ कार्तिक २०७२
किरण अधिकारी नुवाकोटको तुप्चेमा जन्मेका हुन् । सानैदेखि गीतसंगीत भनेपछि हुरुक्क हुने उनको रहर बल्ल पुरा हुदै छ। दशैँ पछी उनको संगीतमा रोईला गीति एल्बम बजारमा आउदैछ । त्यसैको तयारीमा उनि अहिले व्यस्त छन । उनि हाल रास्ट्रीय लोक तथा दोहोरि गित प्रतिस्ठान बागमती अंचलको अध्यक्ष, एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपको निर्देशक ,वर्ल्ड एसोसियसन अफ प्रफमिंग आर्ट्सको नेपाल सेक्सनको उपाध्यक्ष,नेपाल सास्कृतिक संघ नुवाकोटको महाधिबेशन प्रतिनिधि ,नेपाल…विस्तृत समाचार »
संस्पेन्स–थ्रिलर फिल्म ‘हेट स्टोरी’ सिरिजको तेस्रो फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरमा उत्तेजित एवं गर्मागर्मी दृष्यले सनसनी मच्चाईरहेका छन् । फिल्ममा शर्मन जोशी, जरीन खान, डेजी शाह र करण सिंह ग्रोवर मुख्य भूमिकामा छन् । सिरिजका अघिल्लो संस्करण अर्थात फिल्म ‘हेट स्टोरी’ र ‘हेट स्टोरी–२’ जसरी यसमा पनि कयौं सेक्स र बदलाको दृष्यहरु देखाइएका छन् । ट्रेलरअनुसार यो जान्न सकिन्त कि कथा दुई कारोबारी…विस्तृत समाचार »
लोक गायिका रिता थापाको माया बस्यो
किरण अधिकारी, ३० असोज नुवाकोटः लोक गायिका रीता थापाले ‘माया बस्यो’ बोलको सालैजो भाकाको गित बजारमा आएकी छिन् । उनका यसअघि मलेवा सरर, रोईला भाका यति बानी सुधार, एउटा सुन्दर घर मागेको छु लगायतका गीत स्रोताले मन पराएका छन् । गायिका रिताले २०५९ साल वाट लाईभ दोहोरी गाउन शुरु गरेकी हुन् । २०६० सालमा मात्रै औपचारिक रुपमा मलेवा सरर बोलको दोहोरी गीत गायक पुरुषोत्तम न्यौपाने संग…विस्तृत समाचार »
गायिका सर्मिला श्रेष्ठ भन्छिन् लोक संगीतमा बिकृति आयो
गायिका सर्मिला श्रेष्ठ सँग किरण अधिकारीले गरेको कुराकानी । के गर्दै हुनुहुन्छ ? म अहिले दसैँ आउन लग्यो दसैको गीत तिर नै व्यस्त अनि स्टेज प्रोग्राम मा व्यस्त छु् । हाल सम्म कति वटा एल्बम बजारमा ल्याउनु भयो ? हाल सम्म अहिले ४ ओटा एल्बम निकालियो गीत् को संख्या चाही १८ ओटा पुग्यो यसपालिको दसैँ सम्म १९ ओटा हुन्छ । कुन कुन एल्बम बजारमा आएको छ ? …विस्तृत समाचार »
लोकसंगीतमा भबिस्य खोज्दै नवगायिका शिला
किरण अधिकारी नेपाली लोकसंगीतमा आफ्नो स्थान बनाउन र स्थापित हुन संघर्ष गर्नेहरुको भिड बढिरहेको छ । यहि भिडमा एक जना नवागायिका पनि मिसिएकी छिन । उनि हुन् शिला गुरुङ । उनि अहिले एउटी मात्र सपना देखेर लोक संगीतमा संघर्स गरिरहेकी छिन त्यो हो लोकसंगीतमा आफ्नो स्थान बनाएर भोलि गएर गायिकाको पहिचान बनाउने । राजधानी बसेर उनि संघर्स गरिरहेकी छिन । उनको दशैँ पछाडी एल्बम पनि…विस्तृत समाचार »
मोडल रश्मि तामाङ भन्छिन् प्रेमप्रस्ताव आउदा बुवा आमा सम्झिन्छु
नुवाकोट जिल्लाको सामरी गाउ बिकाश समितिमा पिता हरि कुमार तामांग र माता धन्जोम तामांगको कोखबाट जन्मेकी हुन् मोडल रश्मि तामांग । अहिले उनि म्युजिक भिडियोहरुमा आफ्नो बच्रस्व कायम गर्न सफल भएकी छिन । अनि मुलुकमा हुने बिभिन्न अवार्डमा समेत आफुलाई अब्बल साबित गरिरहेकी छिन । हाल उनि दशैँ गीतको छायाकनमा व्यस्त छिन । प्रस्तुत छ मोडल रश्मि तामांगसँग किरण अधिकारीले गरेको कुराकानीः के गर्दै हुनुहुन्छ आजकाल ? …विस्तृत समाचार »
​सफल दाम्पत्यका लागि सात सेक्स सिक्रेट
के तपाई सोच्नुुहुन्छ कि मेरो बेडरुम लाइफ सधैं सुखमय छ, त्यसो हो भने आफ्नो सेक्स्युअल ज्ञानलाई धन्यवाद दिनुस् । त्यसो होइन भने सेक्ससम्बन्धी यो सात सिक्रेटलाई ध्यानमा राख्नुस् । यहाँ तपाईका लागि ‘एस’ शब्दसँग जोडिएको सात तथ्य उल्लेख गर्दैछौ । जुन यसअघि तपाईले नसुनेका पनि हुन सक्छन्। यो तथ्यले तपाईलाई आफ्नो यौन जीवनका विषयमा सोच्न बाध्य पार्नेछ । आमरुपमा जोडीहरु एक वर्षमा १३९ पटक सेक्स…विस्तृत समाचार »
रक्सीले मातेर कलाकार स्टेजमा उक्लीएपछि
२७, असोज काठमाडौँ । कुरा केही समय अगाडीको मात्रै हो । राष्ट्रिय संगितकर्मी संघले तिज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सयौँ सङ्ख्यामा दर्शक थिए भने सभाषद्हरु समेत कार्यक्रममा उपस्थित थिए । कलाकार रमेश दुलालले संयोजन गरेको उक्त कार्यक्रममा घुम्ती नेर लेट भयो बोलको गितबाट निकै ख्याती कमाएका गायक नवराज घोरासैनी जब स्टेजमा उक्लिए कार्यक्रमको माहोल विग्रियो , ह्वास्स गनाउँदै स्टेज उक्लिएका गायकले…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 95 96 97 98 99 Older Last ›